Barcelona Oo Baadi Goobaysa Beddelka Luis Suarez Iyo Xiddigaha Ay Isha Ku Hayso | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(16-12-2018) Luis Suarez hadda da’diisu waxay noqotay 32 jir, waxaana kooxdiisa Barcelona u muuqatay in ay u baahan yihiin laacib booska xiddiga reer Uruguay u buuxiya marka uu cimrigiisu dhamaadka noqdo amaba uu gaabis ka noqdo dhalinta goolahsa.
Toddobaado ka hor, Luis Suarez ayaa sheegay inay tahay wax la fahmi karo haddii kooxdiisa Barcelona ay bilowdo baadi-goobta weeraryahan beddela mustaqbalka, waxaana uu qirtay in cimrigiisa sii weynaanayaa ay keenayso baahida ah in kooxdu hesho da’yar caqli badan.
Hadalkaas kaddib, agaasimaha ciyaaraha ee Barcelona ayaa bilaabay inuu dunida ka raadiyo ciyaartoy heerka Suarez oo kale gaadhi kara oo si fiican u buuxin kara booskaas, waxaana uu isha la helay shan ciyaartoy oo dhamaantood ka ciyaara qaaradda Yurub laakiin mid kali ah uu dalka Spain joogo.
Sida uu qoray wargeyska Mundo Deportivo, Barcelona waxay liiskeeda gashatay xiddigaha Timo Werner oo u ciyaara RB Leipzing oo Jarmalka ka dhisan, Luka Jovic oo u ciyaara kooxda horyaalka Jarmalka ee Frankfurt, Maxi Gomez oo Celta Vigo afka hore uga dheela, Kasper Dolberg oo Ajax udub-dhexaad u ah iyo da’yarka Genoa ee Krysztof Piatek.
Barcelona ayuu warku sheegay inay qiimayn doonto sida ay ku heli karto mid ka mid ah laacibiintan oo ay weliba sii kala siinayso mudnaanta, waxaanay u dhaqaaqi doontaa laacibka ay ku qanacdo waxqabadkiisa iyo qiimaha ay ku heli karto.